Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.4.1 Waqtiga
Waqtiga waxaa loola jeedaa sida badan natiijada tijaabo ah u taageeraan gabagabo guud.
Tijaabi ma'aha mid fiican, cilmi-baarayaashuna waxay soo saareen erayo ballaaran oo lagu qeexayo dhibaatooyinka suurtagalka ah. Xaqdarnimadu waxay loola jeedaa ilaa heerka natiijada tijaabo gaar ah oo lagu taageerayo gabagabo guud. Cilmi-baarayaasha bulshada waxay ogaadeen in ay waxtar u leedahay kala-go'aanka ku-oolka afar nooc oo ugu muhiimsan: ansaxinta natiijooyinka tirakoobka, ansaxinta gudaha, dhisidda ansaxinta, iyo ansaxinta dibadda (Shadish, Cook, and Campbell 2001, chap. 2) . Dhageysiga fikradahaas waxay ku siin doonaan liiska hubinta maskaxda si loo kobciyo lana hagaajiyo naqshadeynta iyo falanqaynta tijaabada, waxayna kaa caawinaysaa inaad la xiriirto cilmi baarayaasha kale.
Natiijooyinka natiijada tirakoobka ee xarumaha ku salaysan haddii falanqaynta tirakoobka ee tijaabinta si sax ah loo sameeyey. Marka la eego macnaha Schultz et al. (2007) , su'aal sida xarunta laga yaabaa in ay xisaabiyaa ay \_(p\_) si sax ah -values. Mabaadi'da xisaabeedku waxay u baahan yihiin in ay naqshadaan oo ay falanqeeyaan tijaabooyinka waxay ka baxsan yihiin baaxadda buuggan, laakiin ma ayan ku saleysneyn da'da da'da digital. Waxa isbeddelay, si kastaba ha ahaatee, waa jawiga xogta ee tijaabooyinka dijitaalka ah ayaa abuuray fursado cusub sida isticmaalka habab barashada mashiinka ah si loo qiyaaso hanta-sameynta saamaynta daaweynta (Imai and Ratkovic 2013) .
Xarumaha ansaxinta gudaha waxay ku saabsan tahay hababka tijaabada ah si sax ah loo qabtay. Ku soo laabashada tijaabada Schultz et al. (2007) , su'aalaha kusaabsan ansaxinta gudaha waxay ku xiran tahay kala soocista, bixinta daaweynta, iyo cabirka natiijooyinka. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad ka welwelsan tahay in kaaliyayaasha cilmi-baaristu aysan akhrineynin mitirka korantada. Xaqiiqdii, Schultz iyo asxaabtiisu waxay ka walaacsan yihiin dhibaatadan, waxayna haysteen imtixaan meter laba jeer; Nasiib wanaag, natiijooyinku waxay ahaayeen kuwo isku mid ah. Guud ahaan, Schultz iyo tijaabooyinka asxaabtu waxay u muuqdaan in ay yeeshaan ansaxin sare oo gudaha ah, laakiin tani mar walba ma ahan kiiska: mawduuca adag iyo tijaabooyinka internetka inta badan waxay ku dhacaan dhibaatooyinka dhabta ah ee bixiya daaweynta saxda ah dadka saxda ah iyo qiyaasta natiijooyinka qof kasta. Nasiib wanaag, da'da dijitalka ah ayaa kaa caawin kara yareynta cabashooyinka ku saabsan ansaxinta gudaha sababtoo ah hadda way fududahay in la hubiyo in daaweynta loo gudbiyo kuwa u qalanta inay helaan iyo in ay cabbiraan natiijooyinka dhammaan ka qaybgalayaasha.
Dhiso xarumo ansax ah oo ku saabsan mowqifka u dhexeeya xogta iyo qaabdhismeedka qiyamka. Sida ku xusan cutubka 2, dhismayaasha waa fikrado aan la taaban karin oo cilmi-bulsheedku sabab u yihiin. Nasiib darro, fikradaha aan la taaban karin mar walba ma laha sharaxyo cad iyo cabbiraad. Ku soo laabashada Schultz et al. (2007) , sheegashada ah in caadooyinka bulsho ee caqligal ah ay hoos u dhigi karaan isticmaalka korontada ayaa u baahan in cilmi-baadhayaashu ay soo saaraan daaweyn lagu xakamaynayo "caadooyinka bulsho ee caqligal ah" (tusaale ahaan, calaamado) oo lagu cabbiro "isticmaalka korontada". Dhibaatooyinka analogga ah, cilmi baarayaal badan ayaa dejiyey daaweyntooda oo waxay qiyaaseen natiijooyinkooda. Habkani wuxuu hubiyaa in, inta ugu badan ee suurtogalka ah, tijaabooyinka ay ku habboon yihiin qaabdhismeedka aan la taaban karin ee la baranayo. In tijaabooyin dijitaal ah oo ay cilmi-baarayaashu la wadaagaan shirkadaha ama dawladaha si ay u bixiyaan daaweynta iyo u isticmaalaan marwalba nidaamka xogta si ay u cabbiraan natiijooyinka, ciyaarta u dhexeeya tijaabinta iyo qaab dhismeedeedeed ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo aad u yar. Sidaa darteed, waxaan filayaa in sameynta saxsanaanta ay noqon doonto mid walaac weyn ka ah tijaabooyinka sayniska marka loo eego tijaabooyinka analogga ah.
Ugu dambeyntii, xarumaha ansixinta ee dibadda ah ee ku saabsan haddii natiijooyinka tijaabadani la wadaagayo xaaladaha kale. Ku soo laabashada Schultz et al. (2007) , mid ayaa ku waydiin lahaa haddii fikrad la mid ah -waxaa la siinayaa dadka macluumaadka ku saabsan isticmaalka tamarta ee xiriirka ay la leeyihiin asxaabtooda iyo calaamad muujinaysa caadooyinka caddaadiska ah (tusaale ahaan, calaamado) - waxay yareeyaan isticmaalka tamarta haddii loo sameeyo si ka duwan sida meel kale. Waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee si fiican loo qorsheeyey oo si wanaagsan loo-socodsiiyey, cabashooyinka ku saabsan ansaxinta dibadda waa adagtahay in wax laga qabto. Waagii hore, doodaha ku saabsan ku-meel-gaadhka dibadda waxay si joogta ah ugu lug lahaayeen koox ka mid ah dadka ku fadhiya qol qolal isku dayaya in ay qiyaasaan waxa dhici lahaa haddii hanaanka loo qabtay qaab kale, ama meel kale, ama kaqeybgalayaasha kala duwan . Nasiib wanaag, da'da dijitaalka waxay u sahlaysaa in cilmi-baadhayaashu ay ka gudbaan xad-gudubyada xog la'aanta ah ayna ku qiimeeyaan ansaxinta dibadda.
Sababtoo ah natiijooyinka ka yimid Schultz et al. (2007) ayaa aad u xiiso leh, shirkad magac leh oo loo yaqaan 'Opower' oo kaashaneysa adeegsiga biyaha ee dalka Mareykanka si loo sii daaweeyo si ballaaran. Iyadoo lagu saleynayo naqshadeynta Schultz et al. (2007) , Opower waxay soo saartay Warbixinnada Tamarta Qorshaha Guriga ah oo leh laba qaybood oo waaweyn: mid muujinaya isticmaalka korontada qoyskiisa ee ku xiran deriskeeda oo leh emoticon iyo mid bixiya talooyin lagu yareeyo isticmaalka tamarta (sawirka 4.6). Ka dib, iyada oo lala kaashanayo cilmi-baarayaasha, Opower ayaa tijaabiyay tijaabooyin la xakameyay si ay u qiimeeyaan saameynta Qorshaha Tamarta Guriga. Inkasta oo daaweynta tijaabooyinkaasi ay caadi ahaan si caadi ahaan ah u bixiyeen jir ahaan-caadi ahaan waraaqaha casriga ee casriga ah-natiijada waxaa lagu qiyaasey isticmaalka qalabka digital-ka ee adduunka jir ahaaneed (tusaale, mitirka korantada). Intaa ka sokow, halkii ay gacanta ku hayn lahayd macluumaadkaan iyada oo caawiyayaasha cilmi-baaristu ay booqanayaan guri kasto, tijaabooyinka Opower ayaa dhammaantood lala wadaagay shirkadaha korontada oo saameeya cilmi-baarayaasha si ay u hellaan akhriska awoodda. Sidaa daraadeed, tijaabadan qayb ahaan khayaali ah ee digital-ka ah waxaa lagu maamulay miisaan ballaaran oo qiimo hooseeya.
Jaantuska 4.6: Warbixinnada Tamarta Guriga waxay laheyd Module isbarbardhiga bulshada iyo habka tallaabooyinka waxqabadka. Waxaa dib-u-bixiyay ogolaansho ka timid Allcott (2011) , tirooyinka 1 iyo 2.
Tijaabada koowaad ee tijaabada ah ee ku saabsan 600,000 oo qoys oo ka kala yimid 10 goobood oo kala duwan, Allcott (2011) ogaaday in warbixinta Home Energy hoos u dhigtay isticmaalka korontada. Si kale haddii loo dhigo, natiijooyinka ka soo baxa daraasad aad u ballaaran, jaanisyo badan oo juqraafi kala duwan ayaa si isku mid ah u la mid ah natiijooyinka Schultz et al. (2007) . Dheeraad ah, cilmi-baaris xiga oo ku saabsan siddeed milyan oo qoys oo dheeraad ah oo ka soo jeeda 101 meelood oo kala duwan, Allcott (2015) mar kale ogaatay in Qorshaha Gurigu uu si joogto ah u yareeyey isticmaalka korontada. Tijaabo kale oo badan oo tijaabo ah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday qaab cusub oo xiiso leh oo aan la arki doonin hal tijaabo oo keliya: cabbirka saameynta ayaa hoos u dhacay tijaabooyinkii dambe (jaantuska 4.7). Allcott (2015) sheegay in hoos u dhacani uu dhacay sababtoo ah, waqti ka dib, daaweynta waxaa lagu dabaqay noocyo kala duwan oo kaqeybgalayaasha ah. Si gaar ah, khidmooyinka leh macaamiishyo badan oo diirada saaran ayaa waxay u badan tahay in ay barnaamijka hore u qaadaan, macaamiishooduna waxay ka jawaab celiyaan daaweynta. Maadaama adeegyadu ay yareynayaan macaamiisha jawiga deegaanka ah, waxay ansixiyeen barnaamijka, waxtarkeeda waxay u muuqatay inay hoos u dhacday. Sidaa darteed, sida kala soocidda tijaabooyinka waxay xaqiijinaysaa in kooxda daaweynta iyo maamulka ay isku mid yihiin, kala soocista goobaha cilmi-baarista waxay xaqiijinayaan in qiyaasuhu ka koobnaan karo koox ka mid ah ka qaybgalayaasha ilaa dad badan oo guud ah (ka feker cutubka 3 oo ku saabsan samaynta). Haddii goobaha cilmi-baarista aan si aan kala-sooca lahayn loo shaacbixin, markaa guud ahaan-xataa laga bilaabo tijaabo si fiican loo qorsheeyey oo loo qabtey - waxay noqon kartaa dhibaato.
Jaantuska 4.7: Natiijooyinka 111 tijaabadood oo tijaabinaya saamaynta Qorshaha Tamarta ee Guriga ee isticmaalka korontada. Goobaha barnaamijka la qaatay kaddib, waxay u muuqdaan kuwo saameyn yar. Allcott (2015) ku doodaya in ilaha ugu muhiimsan ee qaabkani yahay in goobaha leh macaamiisha deegaanka ah oo Allcott (2015) ay aad ugu dhowdahay inay barnaamijka kiciyaan. Laga soo bilaabo Allcott (2015) , sawirka 3.
Wadajir ahaan, 111 tijaabo-10 oo Allcott (2011) iyo 101 Allcott (2015) qiyaasey 8,5 milyan oo qoys oo ka kala yimid dhamaanba Maraykanka. Waxay si joogta ah u muujinayaan in Qorshaha Tamarta ee Guriga ay yareeyaan celceliska Isticmaalka korontada, natiijada taageera natiijooyinka asalka ah ee Schultz iyo asxaabta ka yimid 300 guri oo ku yaal California. Marka laga soo tago oo kaliya iskudubarid natiijooyinkan asalka ah, tijaabooyinka dabagalka ayaa sidoo kale muujinaya in cabbirka saameynta ay ku kala duwan yihiin meesha. Tijaabooyinka tijaabada ah waxay sidoo kale muujinayaan laba dhibcood oo guud oo ku saabsan tijaabooyin tijaabo ah oo qayb ahaan ah. Marka hore, cilmi-baarayaashu waxay awood u leeyihiin inay wax ka qabtaan cabashooyinka ku saabsan ansaxinta dibadda marka kharashka tijaabada ah uu hooseeyo, taasina waxay dhici kartaa haddii natiijada horay loo qiyaaso nidaamka xogta marwalba. Sidaa daraadeed, waxay soo jeedinaysaa in cilmi-baadhayaashu ay tahay inay fiiro u yeeshaan dabeecadaha kale ee muhiimka ah iyo kuwa muhiimka ah ee hore loo diiwaan geliyay, ka dibna u samee tijaabooyinka ku saabsan kor u-qaadista kaabayaasha hadda jira. Tan labaad, tijaabadani waxay na xusuusinaysaa in tijaabooyinka sahlan ee digital-ka aan ahayn kaliya online; Si kastaba ha noqotee, waxaan filayaa in ay meel walba oo ay ka heli doonaan natiijooyin badan oo lagu cabbirayo dareemayaasha deegaanka dhismaha.
Afarta nooc ee wax-ku-oolnimada - ansaxinta natiijada tirakoobka, ansaxinta gudaha, dhisida saxda ah, iyo ansixinta dibadda-waxay bixisaa liiska hubinta maskaxda si ay uga caawiso cilmi-baarayaasha in ay qiimeeyaan haddii natiijooyinka tijaabo gaar ah ay ku taageeraan gabagabo guud. Marka la barbardhigo tijaabooyin isku dhafan, tijaabooyin tijaabo ah, waa in ay ahaataa mid sahlan in wax looga qabto ansaxinta dibadda, waana inay sidoo kale sahlanaataa xaqiijinta ansaxinta gudaha. Dhinaca kale, arrimaha la xidhiidha ansaxnimada waxay u badan tahay inay noqdaan kuwo culeys badan oo tijaabo ah oo tijaabo ah, gaar ahaan tijaabooyinka goobaha dijitalka ah oo ay ku lug leeyihiin iskaashiga shirkadaha.